DF oo faahfaahin ka bixisay sababta go’itaankii internetka - Caasimada Online
Home Warar DF oo faahfaahin ka bixisay sababta go’itaankii internetka
DF oo faahfaahin ka bixisay sababta go’itaankii internetka
Muqdisho (Caasimada Online) – War-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda Boostada iyo Isgaarsiinta xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in qadka Internet-ka haatan loo xaliyey si ku meel gaar ah, balse ay weli jirto cilladii ku timid.
“Khadka Internet-ka ayaa dib ugu soo laabtay Koonfurta & Bartamaha Soomaaliya, kadib markii si ku-meel-gaar ah loo xalliyay cilladdii jirtay, iyadoo ay Wasaaraddu fartay shirkadaha adeegga internetka bixiya inay sida ugu dhaqsaha badan u xalliyaan cilladda, isla markaana Wasaaradda la soo wadaagaan hadba meesha ay wax marayaan” ayaa lagu yiri qoraalka wasaaradda.
Qoraalka ayaa intaas ku daray “Shirkadda Dalkom, oo Soomaaliya wakil uga ah xarigga internetka Eastern Africa Submarine Cable System (EASSY), ayaa warbixin ay soo gaarsiisay Wasaaradda ku sheegtay in iyaga oo kaashanaya EASSY ay u suurto gashay in ay dib u soo celiyaan addeegga Internetka si KMG ah.”
“Ka hor inta ay soo gaarayaan badweynta koox caalami ah oo ka caawisa hagaajinta cilladda ku timid khadka, taas oo ah meel xeebteena u jirta 27km. Shirkaddu waxay sheegtay in xarigga uusan go’in, balse uu soo gaaray dhaawac, balse haatan loo xalliyay si KMG ah (Ka eeg sawirka oo muujinaya meesha khadku ka cilladoobay).”
“Shirkadaha kale ee xargaha soo wada waxaan fareynaa inay dadajiyaan hawshooda, waayo dhowr mar ayaanu aragnay inay khatar weyn tahay in lagu tiirsanaado hal xarig oo kaliya, dhinaca kalena waa u fursad ganacsi oo muujineysa in adeeggooda baahi loo qabo,” ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay wasiir Canshuur.